पहिलो, तपाईँलाई लागि थप सुविधाजनक छ के परिभाषित गरौं। खुवाउने बिरालोहरु दुई प्रकार को हुन सक्छ: समाप्त फिड (ड्राई र समर्थित) र तथाकथित "naturalka"। र पहिलो र दोस्रो embodiments मा, फिड सन्तुलित र उपयोगी हुनुपर्छ।
खुवाउने बिरालोहरु सुक्खा खाना यसको लाभ छ। पहिले, यो छुट्टी "सबै समावेशी" शक्ति छ। त्यहाँ एक पूर्ण सीमा छ, र भिटामिन र खनिज। तर खाना उच्चतम गुणस्तर वर्ग "सुपर प्रिमियम" को हुनुपर्छ (चरम अवस्थामा - वर्ग "प्रिमियम") सिद्ध गरेको सकारात्मक र प्रमुख गुणस्तर नियन्त्रण निर्माताहरु को र ट्रेडमार्क। यो "रयल CANIN" (निर्माता - फ्रान्स), "PURINA", "IAMS", "HILS" (निर्माता - संयुक्त राज्य अमेरिका)।
ब्रिटिश वयस्क बिरालोहरु पर्याप्त ड्राई फिड को 100 ग्राम, वा डिब्बाबंद खाना को 160 G लागि। र यहाँ प्रश्न उठ्छ: समाप्त फिड को कि पहिले नै राम्रो छ - सुक्खा खाना वा समर्थित? कस्तो ब्रिटिश बिरालो खुवाउन? भन्न पक्कै गाह्रो। सुक्खा खाना सस्ता छ भन्ने तथ्यलाई अब रहन्छ, र बिरालो पत्थर गठन हुन दाँत कम मा हुनेछ कि likelihood। तर समर्थित खाना धेरै राम्रो डाइजेस्ट गर्न। र थप बिरालोको बच्चाहरुको र पुरानो बिरालोहरु गर्न अनुकूल। यहाँ तपाईँले परिभाषित गरेका छन्। बस प्याकेजहरू मा सल्लाह बेवास्ता छैन। बिरालोको बच्चाहरुको लागि खाद्य पदार्थ वयस्क बिरालोहरु र विपरित खुवाउन छैन। बिरालोहरु लागि खानेकुरा किन्न छैन, कुकुर इरादा। तिनीहरूले पूर्ण बिभिन्न रचनाहरूको छन्। विभिन्न खाद्य उत्पादकहरु कहिल्यै मिश्रण (अपवाद मात्र एक देखि बिरालो खाना को एक अन्य गर्न अनुवाद गर्न सक्छन्)। भिटामिन - केही तयार बनाएको खाना र विशेष गरी थपिएको छ। तपाईं आवश्यक सबै पहिले नै छ। कि खाना र किन "सन्तुलित" भनिन्छ छ। शेष तोड्न छैन! पानी पहुँच स्थिर हुनुपर्छ।
अब "naturalke", वा प्राकृतिक खाद्य बारेमा। यस मामला मा, बिरालोहरु खुवाउने धेरै जटिल छ। यसलाई भिटामिन र खनिज को एक ब्यालेन्स हासिल गर्न र सही क्यालोरी गणना गाह्रो छ। बिरालोहरु खुवाउने प्राकृतिक खाद्य यसको आफ्नै नियम, जो कच्चा पोर्क, छम, धूम्रपान को अपवाद सुरु, नुनीन र मसालेदार खाद्य पदार्थ, कच्चा नदी माछा, मसला, मिठाई छ।
मेनु को एक उत्कृष्ट विकल्प हुनेछ:
- byproducts: मृगौला, मुटु, कलेजो, फोक्सोमा;
- डेयरी उत्पादन।
नबिर्सनुहोस् बिरालो खाना प्रोटिनको उच्च मात्रा समावेश उत्पादन, को predator सामान्य कामकाज को लागि त आवश्यक - मुख्य रूप मासु समावेश गर्नुपर्छ। राम्रो यदि यो हुनेछ: मासु, कुखुरा पालन, समुद्री माछा। तर माछा कुल आहार को 15% भन्दा हुँदैन। धेरै उपयोगी: दूध, दही, पनीर, चीज सुखा किण्वित। खाना मिश्रित अनाज हुन सक्छ। खाना कोठा तापमान हुनुपर्छ। यदि बिरालो खाएको छैन, यो कचौरा मा खाना नछोड अर्को समय सम्म खाना हटाउन। खुवाउने बिरालोहरु अनुसूचीमा बाहिर गर्नुपर्छ।
बिरालो वजन भएको छ भने, सेट उनको उपवास दिन (जस्तै, एक हप्ता) वा औषधिको खुराक कम। यो तरकारी (काउली, गाजर, आलु), को आहार थप्न उपयोगी छ गहुँ चोकर, गेहूं। बिरालोहरु को आहार सही गरे भने, तपाईंको pitomitsy चमकदार कपाल र सधैं राम्रो मुड मा, ठूलो आकार मा हुनेछ।
तर खाना एउटा विशेष दृष्टिकोण गर्भवती बिरालोहरु आवश्यक र हालै गर्नेहरूलाई आमा बन्छन्।
पहिलो हप्तामा गर्भावस्था को समयमा बिरालोहरु खुवाउने सामान्य कुनै फरक छ। त्यसपछि, यो औषधिको खुराक 10-15% वृद्धि भएको छ। आहार को आधार मासु हुनुपर्छ। साथै, यो दुग्ध उत्पादन, समुद्र माछा (तर सानो), उसिनेर अन्डा दिन आवश्यक छ। जोडी भिटामिन। तपाईं आफ्नो बिल्ली खुवाउन तयार खुवाउन भने, बस नै 10-15% गर्न खुराक वृद्धि।
जन्म दिने पछि बिरालो कसरी खुवाउन? आखिर, के आमा खान्छ, र उनको दूध संग बच्चाहरु प्राप्त। खुवाउने समयमा बिरालो खाना क्याल्सियम र फस्फोरस मा धनी हुनुपर्छ। घरेलु पनिर र समुद्र माछा को संख्या वृद्धि। बिरालो मा डेयरी उत्पादन को प्रयोगबाट विकार सुरु यदि छ भने, मेनु तिनीहरूलाई बहिष्कार र खाना भिटामिन थप्न।
तर यहाँ र आफूलाई एक लाभप्रद स्थिति खुवाउन तयार: कुनै additives आवश्यक छैन। पहिले नै सन्तुलित खुवाउन र प्रोटिन, भिटामिन र खनिज को इच्छित रकम समावेश गर्दछ। को रुचाउने निर्देशन पालन गर्न र निरन्तर बिरालो ताजा पानी छ कि निश्चित - तपाईं के गर्न छ मात्र कुरा।
के खाना तपाईं, पाठ्यक्रम, निर्णय गर्न बिरालो खुवाउन। खुवाउने प्रजाति, जंगली "को लागि" बारेमा बहस र "विरुद्ध" कहिल्यै कम छैन। समाप्त ड्राई फिड हाम्रो जनावर माथि धेरै पुस्तामा र फल फलाउन: स्वस्थ, बलियो, fatness को सबै भन्दा राम्रो। तर एउटै परिणाम गर्ने, प्रगति बाबजुद, छनौट "naturalku" को प्रजनकों अवलोकन छन्। निर्धारित गर्न हतार छैन। प्रजनकों आफ्नो पशुचिकित्सा संग सल्लाह लिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईं आफ्नो ज्ञान र अनुभव साझेदारी गरौं। तिनीहरूले सधैं बताउन एक कहानी छ। - तपाईंको कार्य सुन्न र निष्कर्ष आकर्षित छ।
तपाईंको जलजीवालय मा Labe दुई रंग
Sheltie: नस्ल को एक विवरण। मालिकको, फोटो, मूल्य समीक्षा
को Motherboard गर्न AGP-कनेक्टर